Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay safiirka Mareykanka u fadhiya gudaha Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay safiirka Mareykanka u fadhiya gudaha Soomaaliya
Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay safiirka Mareykanka u fadhiya gudaha Soomaaliya
February 17, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay safiirka Mareykanka u fadhiya gudaha Soomaaliya. [Xigashada Sawirka: Radio Muqdisho]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan la qaatay safiirka dalka Mareykanka u fadhiya gudaha Soomaaliya Stephen Schwartz.
Kulanka ayaa maanta oo Jimce ah ka dhacay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee gudaha Muqdisho.
Sida uu sheegay raadiyaha dowladda ee Radio Muqdisho madaxweynaha iyo safiirka ayaa ka wadahadlay xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya labada dal.
Madaxweyne Farmaajo ayaa safiirka ka codsaday in Mareykanku ay sii kordhiyaan taageeradooda ay siiyaan Soomaaliya ee ku aadan dhinacyada amniga sida tababarida iyo mushahaarsiinta ciidamada.
Stephen Schwartz ayaa dhankiisa balanqaaday in ay sii wadi doonaan taageeradooda ay la garabtaaganyihii dowladda federaalka Soomaaliya.
Ugu dambayn, safiirka Mareykanka ayaa madaxweyne Farmaajo ugu hambalyeeyay guushii dhawaan uu ka gaaray doorashadii madaxweynenimada Soomaaliya.
June 23, 2017 Mareykanka oo dhawaan xarun diblomaasiyadeed oo joogto ah ku yeelan doona gudaha Soomaaliya
October 6, 2017 Safiirkii Mareykanka u joogay Soomaaliya oo iscasilay
August 19, 2017 Madaxweynaha Soomaaliya oo u safri doona Masar
March 15, 2017 Xoghayaha arrimaha dibada Britain oo yimid Muqdisho
Madaxweynaha Kenya oo aqbalay dhambaal casumaadeedka ka qaybgalka caleemosaarka Farmaajo
Puntland: wild animals started to die due to drought
Kiiska Ikraan Tahliil oo khilaaf ka dhex abuuray masuuliyiinta Dowladda Federaalka Soomaaliya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kiiska shaqaalaha NISA ee la waayay Ikraan Tahliil ayaa khilaaf ka dhex abuuray masuuliyiinta sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya. Xalay, Raysulwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shaqo joojin ku sameeyay agaasimaha [...]
Koobka Qaramada Afrika oo la qaban doono bilaha June iyo July waxaana laga dhigay 24 qaran
Rabat-(Puntland Mirror) Koobka Qaramada Afrika ayaa la qaban doonaa bilaha June iyo July ee sanadka 2019, Xiriirka Kubada Cagta Afrika (CAF) ayaa sidaa xaqiijiyay. Koobka ayaa awal la qaban jiray bilaha January iyo February, taasoo [...]
Garowe police chief wounded in shooting
Garowe-(Puntland Mirror) Garowe police chief Mohamoud Muse Bile popularly known as “Fardafuul” has been wounded in a shooting in Garowe city on Wednesday, security sources said. The shooting occurred in a residential home in Garowe [...]